PERIKOPA FJKM ALAHADY 01 NOVAMBRA 2015 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 01 NOVAMBRA 2015
Alahady XXII manaraka Trinite
Levitikosy 19.35-37 / Lioka 3.7-14 / 2 Koritiana 7.11-16
35 Aza manao izay tsy marina amin’ny fitsarana, na amin’ny fandrefesana, na amin’ny fandanjana, na amin’ny famarana.
36 Mizana marina, vato marina, efaha marina, hina marina, no hotananareo: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta.
7 Dia hoy izy tamin’ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy?
8 Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana; ary aza manao anakampo hoe: Manana an’i Abrahama ho rainay izahay; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an’i Abrahama avy amin’ireto vato ireto.
9 Ary, indro, efa mipetraka ao amin’ny fototry ny hazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapohina ka hatsipy any anaty afo.
10 Ary ny vahoaka nanontany an’i Jaona hoe: inona ary no hataonay?
11 Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an’ny tsy manana; ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toy izany koa izy.
14 Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe: Ary inona kosa no mba hataonay? Dia hoy izy taminy: Aza mitohatoha foana amin’olona, ary aza miampanga lainga, ary mianina amin’ny karamanareo.
2 Koritiana 7.11-16
11 Fa, indro, izany nampalahelovana araka an’Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo! eny, fialan-tsiny manao ahoana! fahatezerana manao ahoana! fahatahorana manao ahoana! faniriana manao ahoana! zotom-po manao ahoana! famaliana ny ratsy natao manao ahoana! Tamin’izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin’izany raharaha izany ianareo.
12 Koa na dia nanoratra taminareo aza aho, dia tsy noho ny nanao izay tsy marina, na noho ny niaritra izay tsy marina, fa mba haseho aminareo eo anatrehan’Andriamanitra ny fahazotoanareo hanaiky anay.
13 Ary noho izany dia nampiononina izahay, ary tamin’ny nampiononana anay dia vao mainka nifaly izahay noho ny fifalian’i Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny.
14 Ary raha nisy nataoko rehareha taminy ny aminareo, dia tsy mahamenatra ahy izany; fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin’i Titosy ny aminareo.
15 Ary vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony, raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny haben’ny fahatahorana sy ny fangovitana nandraisanareo azy.
16 Ary faly aho fa matoky anareo amin’ny zavatra rehetra.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 27 octobre 2015